Umntu omhle ngumhlobo wesimboli sompumelelo nokuchuma. Ukuhambelana ngokugqithisileyo kwintambo yezikhonkwane eziphilileyo zithetha ngentsingiselo enhle yomnini wayo, onika amacinci ukuba abonakale esicatshulwa kwaye enobuhle. Ngelishwa, namhlanje akuyiyo yonke intokazi inokuziqhayisa ngezipikili ezingokwemvelo eziqinileyo. Kule meko, iinkqubo ezikhethekileyo zokubuyiselwa nokuqiniswa kwezipikili zinokukunceda. Nangona kunjalo, ininzi yabo inomdla omkhulu - ixesha elide lokonyango, ngokuhlala lihlala ngaphezu kweenyanga enye yokulungiswa kwetafile. Kuthekani ukuba uzisa izipikili zakho ngokukhawuleza kwaye ungenakonakalisa impilo yakho? Ukuyicombulula le ngxaki iza kunceda inkqubo entsha yokuNyango lweNdalo kwiNkampani yaseJamani yeLCN.
Ukusebenzisa izithako zemvelo kukuvumela ukuba ube nomphumo omkhulu - ubuhle, ngokusekelwe kwimpilo. Inkqubo yoLondolozo lweNdalo lwe-LCN ngumzekelo wendlela intsebenzo yakutshanje kwi-cosmetology ehlangene nezithako zemvelo inika umphumo osisigxina kwixesha elifutshane kakhulu. Isiseko soKhathalelo lweNdalo yendalo yendalo ye-arix, isityebi kwi-resin, i-vitamin A, i-beta-keratin, ipolisi kunye namaminerali. Inomphumo ochasayo-ovuzayo kunye nokunciphisa, usebenze amandla okuhlaziywa kwiplani yepiki kunye nokukhawuleza ukukhula kwawo.
I-LCN Inkqubo yoNonophelo lweNdalo ngokwayo iqulethwe yiCream Care Cream, i-Oil nail, iipolisi ze-nail kunye ne-brush ekhethekileyo. Inkqubo yokutywinwa iqhutyelwa kwizigaba ezi-4 kwaye ayithathi imizuzu engaphezulu kwama-20-25, kwaye iziphumo zeempiki eziphilileyo kunye ezinamandla zifezekiswa ngoko nangoko. Ekuqaleni, ubude beentambo ze-brush ezixubileyo ukusuka kwisetyenziselwa ukusetyenziswa kweCream Care Cream. Ukusebenzisa uhlangothi olupinki lwefayilisi yeedilesi, izipikili ziphosiweyo kwaye ngoko ukhilimu uxutywa kwisitya. Emva koko, kusetshenziswe iAil Oil, eyenza izipikili zikhanye kwaye zibonakala kakuhle. Kufuneka ixutywe ngecala elimhlophe lefayile yeedilesi. Kwaye ekugqibeleni umququzelelo ufezekiswa ngoncedo lwegrey side ephosa ifayile, eyenza ukuba kukhanye ukukhanya.
I-LCN kunye ne-Mercedes: umgca weziqhulu ezimbini
Amathanga enkukhu ngeeshizi
Kulula kangakanani kwaye ukukhawuleza ukufunda olunye ulwimi?
Pizza inhlama kunye nobusi
I-Mackerel ibhaka kwi-oven microwave